Abigel​—⁠“Ka Ezi Uche Gị Bụrụ Ihe A Gọziri Agọzi”
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Amis Arabic Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Douala Dutch Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kenyan Sign Language Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Ọ BỤ Devid, bụ́ onye Izrel oge ochie, kwuru ihe a iji jaa otu nwaanyị ọ hụrụ mma. Aha nwaanyị ahụ bụ Abigel. Gịnị mere Devid ji jaa ya mma? Olee otú ihe nwaanyị ahụ mere ga-esi baara anyị uru?
Ọ bụ mgbe Devid na-agbara Eze Sọl ọsọ ka ọ hụrụ nwaanyị a. Abigel bụ nwunye Nebal. Nebal bụ aka ji akụ̀. A na-azụrụ ya ìgwè atụrụ n’ebe ndịda Juda nke bụ́ ugwu ugwu. Devid na ndị ikom ya chebere ndị na-azụrụ Nebal atụrụ na atụrụ ha. Devid mechara dunye ndị ozi ya ka ha gaa rịọ Nebal ka o nye ha ‘ihe ọ bụla aka ya ruru,’ bụ́ ihe a na-eri eri. (1 Sam. 25:8, 15, 16) N’ihi otú Devid na ndị ikom ya si chebe ihe Nebal nwere, a gaghị asị na arịrịọ ahụ adabaghị adaba.
Ma, Nebal mere ihe aha ya pụtara, nke bụ́ “Onye Na-enweghị Uche” ma ọ bụ “Onye Iberiibe.” O ji olu ike saa ndị ozi Devid okwu ma kparịa ha n’enyeghị ha ihe ọ bụla. N’ihi ya, Devid jikeere imesi Nebal ike n’ihi otú o si jiri olu ike saa ndị ozi ya okwu ma kparịa ha. Nebal na ndị ezinụlọ ya ga-ata ahụhụ n’ihi iberiibe ya.—1 Sam. 25:2-13, 21, 22.
Mgbe Abigel chọpụtara na mkpamkpa ga-akpa ma Devid mee ihe o kpebiri ime, ọ katara obi mee ihe. Ọ kwanyeere Devid ùgwù ma rịọ ya ka o cheta adịm ná mma ya na Jehova. Cheta na ọ bụ Devid ga-abụ eze ma Sọl chịchaa. Abigel bugaara ya na ndị ikom ya nri. N’ihi ya, Devid kwuru na Jehova ji nwaanyị a mee ka ọ ghara ime ihe ga-eme ka Chineke were ya ka onye ikpe mara. Devid gwara Abigel, sị: “Ka ezi uche gị bụrụ ihe a gọziri agọzi, ka gị onwe gị, bụ́ onye gbochiri m taa ịba n’ikpe ọmụma ọbara, bụrụkwa onye a gọziri agọzi.”—1 Sam. 25:18, 19, 23-35.
O doro anya na anyị agaghị achọ ime ka Nebal, bụ́ onye ihe ọma e meere ya na-adịghị ya mma. Ihe ọzọ bụ na, anyị hụ na nsogbu eruwela ka mmiri, anyị kwesịrị ime ihe anyị nwere ike ime iji gbochie ya. N’eziokwu, anyị ga-ekwuli ihe ahụ otu ọbụ abụ gwara Chineke. Ọ sịrị ya: “Kụziere m . . . ezi uche na ihe ọmụma.”—Ọma 119:66.
Anyị mee ihe gosiri na anyị ma ihe ma ọ bụ nwee ezi uche, ndị ọzọ nwere ike ịchọpụta. Ma hà kwuru ya ma ọ bụ na ha ekwughị ya, obi nwere ike ịdị ha otú ọ dị Devid, bụ́ onye sịrị: “Ka ezi uche gị bụrụ ihe a gọziri agọzi.”
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Jun 2017